Nnweta nke ala na ụlọ + Citizmụ amaala nke Montenegro
New nkeji iri na ise Porto Montenegro
Boka Ebe bụ ngọngọ obodo ọhụrụ na Porto Montenegro, ebe ikuku nke ememe na ọdịmma na-achị. Ebe a, a n'echiche nke obodo dabeere na a mkpokọta ọchịchọ maka nọ n'ọrụ ndụ na-ekpo ọkụ seaside na ndị enyi. Ebe Boka nwere ihe niile: ọtụtụ ụlọ ahịa na ebe a na-ere ihe ọ ,ụ cafụ, ụlọ ezumike na ebe ọdịmma dị mma; ebe a nchọpụta ga-echere gị ebe niile. Nke a bụ ebe ndị enyi na-ezukọ, ụmụaka na-egwu egwu na ịchị ọchị anaghị akwụsị akwụsị.
Ọnụ ụzọ nke ndụ n'ụzọ dị iche:
Central square - etiti nke mma na nzukọ ebe
Fitness nkwari akụ SIRO
Energy Center na ọdọ mmiri na n'elu ụlọ mmanya
Eslọ oriri na ọ restaurantsụ Goụ ndị mara mma na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ
Gallọ ahịa na ụlọ ahịa na-egosipụta ụdị ndị a ma ama
Echiche echiche na ụlọ oriri na ọ gastụ gastụ gastronomic
Cinema nwere ụlọ nzukọ atọ
Mgbidi ime ụlọ, izu ụka izu ụka, ama egwuregwu, ihe ngosi mmekọrịta
Mmemme sara mbara nke ihe omume n'afọ niile
N'ime obi Boka Ebe bụ ụlọ obibi. Ihe niile banyere ụlọ a juputara na mbara igwe, sara mbara iji weghachi ike nke uche na nke anụ ahụ. Ebe Boka na-enye ogo dị oke ọnụ na ọkwa dị elu nke Porto Montenegro ma na-enye ihe ọzọ dị ọnụ ala maka ndị na-azụ ahịa nwere nghọta. Nwere ike ịhọrọ n'etiti ụlọ ndị Hotel SIRO jikwaa ma ọ bụ ụlọ nkeonwe.
Ba ụba nke ìhè nkịtị
Ejiri nlezianya ahọpụtara ihe na-egosipụta echiche nke ọmarịcha okomoko
Chepụta nke jikọtara arụmọrụ na aesthetics
Echiche ndị dị egwu nke Porto Montenegro Marina na Bay nke Kotor
Tonweta nnukwu ọrụ
Apartlọ ndị a na-emeghe ma saa mbara na-egbuke egbuke dị mma maka obibi na-adịgide adịgide na, n'ihi ọnọdụ ha, na-enye ndị na-achọ udo na nzuzo n'ime oke nke Porto Montenegro nzuzo dị ukwuu.
69 ụlọ nkeonwe
Ohere isonye na mmemme ijikwa M-Residences
Tonweta naanị ihe onwunwe
Tonweta ọdọ mmiri na-enweghị njedebe na ịnweta ebe ndị dị n'èzí
Ohere puru iche iji jiri ihe di iche iche mee ka ime ya di iche iche site na ndi okacha amara Bradley Theodor na Milian Suknovich
Studios, 1, 2 na 3 bedroom apartments, duplexes na penthouses
Ebe Boka na Nwa amaala Montenegrin:
Ndị nwe ụlọ nwere ohere pụrụ iche isonye na Montenegrin Citizenship Investment Program (CBIP) wee bụrụ nwa amaala nke mba a dị ịtụnanya. Purchasezụta ụlọ ndị ụlọ na-elekọta na họtel na Boka Ebe na-enye ohere pụrụ iche isonye na Mmemme a wee nweta ụmụ amaala Montenegrin.